Agaasime ka tirsan maamulka Banaadir oo la qabtay isagoo isku qarxin raba Xarunta…. | Hadalsame Media
Home Wararka Agaasime ka tirsan maamulka Banaadir oo la qabtay isagoo isku qarxin raba...
(Muqdisho) 17 Nof 2019 – Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa Muqdisho Cumar Maxamed Maxamuud ayaa sheegay in intii uu xilka guddoomiyaha gobolka hayay ciidamada sirdoonka ay gacanta ku dhigeen Agaasime ka tirsan maamulka Gobolka Banaadir oo is-qarxin damacsanaa.
Iyada oo feejignaantaas lagu jirana gacanta lagu dhigay Agaasime uusan magaciisa iyo shaqadiisa sheegin oo isna damacsanaa is qarxin kale oo Xarunta ka dhacda.
Cumar Filish ayaa sheegay in agaasimaha la xiray uu qirtay in uu damacsanaa in uu is qarxiyo hay’adaha amaankana ay gacanta ku hayaan.
Previous articleDuuliye IMAARAATI ah oo la sheegay inuu 3 todobaad wax ka duqeeyay Marinka Gaza (Kashifaad lama filaan ah)
Next article”Ma ogolaan karno inay Sweden ka jiraan Hogaamiyeyaal qabiil” – Hoggaamiye Xisbi sheegay war loo qaatay DUURXUL ka dhan ah Soomaalida!